Iibso Universal Car Phone Holder & Super Fast Wireless 15W Qi Charger - Shixnad Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Universal Holder Phone Holder & Super Fast Wireless 15W Qi Charger
$ 38.99 qiimaha joogtada ah $ 58.99
maraakiibta From France CN SPAIN Russian Federation
Color 15W Hawada Hawada 15W Muraayadda Hal Suit
Faransiiska / 15W Hawada Hawada CN / 15W Hawada Hawada SPAIN / 15W Dashboard Xiriirka Ruushka / 15W Dashboard SPAIN / 15W Hawada Hawada Xiriirka Ruushka / 15W Hawada Hawada France / Hal Suit CN / Hal Suudh Dashboardka Faransiiska / 15W Dashboardka CN / 15W SPAIN / Hal Suit Xiriirka Ruushka / Hal Suud
Universal Hold Phone Telephone & Super Fast Wireless 15W Qi Charger - CN / 15W Hawada Hawada gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Xeedho: xeedho wireless
Astaamaha: Ballaarinta Cufis-jiidka
Nooca la midka ah: Universal
Af hayeen: Maya
Nooca: Hayaha Gawaarida
Isticmaal tusaalayaal: la jaan qaada nooca lacag-bixinta wireless-ka Qi-caadiga ah
Gelitaanka: 5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
Wax soo saarka: 15W (oo ku habboon 5W 7.5W 10W)
Masaafada buuxinta: in kabadan 8mm
Isdhexgalka Input: Nooca C
Cabirka taleefanka gacanta: 4.7-6.5 inji taleefanka gacanta ah
Xaaladda ku habboon: hawada hawada / qalabka qalabka
Size: 96.70 * * 88.17 54mm
Feature: Lacag-bixinta wireless-ka ah ee gaariga, taleefanka gaariga ee wireless-ka ah ee loogu talagalay iPhone 12 mini pro max, oo loogu talagalay iPhone 12 X 8 Plus / Samsung Galaxy S9 S8 XUSUUS 8, Xeedho taleefan wireless / xeedho wireless, xarkaha gaariga xiraha baabuurka ee mobilka gaariga, Xarkaha wireless Wixii Samsung S10 S9 S8 Plus, Telefoonka Gawaarida Gawaarida / Jooji Cuf-ka-istaaga ee taleefanka gacanta, Gawaarida Gawaarida / Haystaha taleefanka / taleefanka wireless-ka
Ku habboon: Khadka suunka geeska ee cabbirka taleefanka 4.7-5.0 inch, Taleefoonka Cabbirka 5.0-5.5 inji, cabbirka taleefanka: 5.5-6 inji, cabirka taleefanka: 6.0-6.9 inji
Si otomaatig ah ula jaan qaado 5W / 7.5W / 10W / 15W awoodda amarka wireless.
Smart dual-chip iyo gariiradda nadiifka ah ee nadiifka ah ayaa ka dhigaya kuwa haysta taleefannada kuwo aamin ah oo kor u qaadaya 70% dhakhso.
Koronto saafi ah, oo fududahay in lala kulmo xaalado wadooyin kala duwan
Awood-bixiye awood leh ayaa adkaysan kara koronto la'aan, ka dib markuu joojiyo mishiinka, weli wuu furi karaa oo xidhi karaa caadi ahaan 4-5 jeer.
Hawl hal gacan ah, ku habboon, oo sahlan oo la soo qaado oo la dhigo.
Nooca dashboardka iyo nooca hawo-qaadashada waa la dooran karaa, waxaa loo isticmaali karaa muuqaallo badan.
Wax walba si fiican bay u shaqaynayaan
Si fiican bay u shaqaysaa, waan ku qanacsanahay
dhoofinta degdegga ah gaarsiinta degdegga ah !! shaygu si fiican buu u shaqeeyaa Waan jeclahay sida ay u fududahay in la isticmaalo aad u fudud. koobkii nuugiddu ma qabsan dashboardkayga laakiin waxay leedahay xaraash aad u weyn oo galaaska ku jira! haa xeedho bilaa wireless ayaa shaqaysa! isticmaalay Samsung s21. mahadsanid, aad ayaan kugula talinayaa !!!
Wax walba waa hagaagsan yihiin, waayo iPhone 8 oo dabool qaro weyn leh ayaa yimid. Kaliya 2 minuses: 1. ballanqaaday dhalmada maalmo yar gudahood, usbuuc iyo badh. Maalinta la filayo in la keeno, marka la dalbanayo xaqiiqda ka dib, alaabtii weli lama dirin. Haa, iyo dirista waraaqaha, oo aan digniin jirin markii la dalbanayey-I aad baan ugu dhibsanaa, way fiicnaan lahayd in boostada loo diro. 2. giraangiraha ku dhejinaya hayaha laftiisa sagxadda kuma filnayn. Waxay soo jeesaneysaa ilaa aad isku xirto labadan qeybood. Waa inaan ka qaataa Holder -kii hore, dhexroorka weyn